Distrikan’Anjozorobe: kaominina 15 nandrafitra momba ny fitaterana | NewsMada
Distrikan’Anjozorobe: kaominina 15 nandrafitra momba ny fitaterana
Tetikasa iray lehibe, Drafitra kaominaly momba ny fitaterana, ho fampiharana ny fitondrana tsara tantana sy ny fitsinjaram-pahefana atao any amin’ny distrikan’Anjazorobe, mahakasika kaominina 15. Sakana ho an’ny fampandrosoana amin’ny sehatra rehetra, indrindra ny toekarena ambanivohitra ny tsy fisian’ny lalana. Koa namolavola ny Drafitra kaominaly momba ny fitaterana (DKF) ambanivohitra ny ONG Lalana sy ny ONG Green. Manampy amin’ny famatsiam-bola momba izany ny Vondrona eoropeanina. Natomboka ny volana marsa 2017 ny tetikasa hatramin’ny 2020.
Omaly, nampahalala ny tombanezaka mahakasika izany ny ONG Lalana amin’izao an-tsasaky fotoana nanombohana azy izao. Kaominina 15 ao anatin’ny distrikan’Anjozorobe amina kaominina 19 nanaovana ny asa. Nandritra izay roa taona izay, najoro ny Rafitra ifotony fikaonandoha (RIF) mahakasika ny fitantanana ny lalana any ambanivohitra. Kaominina 10 nahavitana nananganana izany, ny dimy ambiny efa nahavita ny azy niaraka amin’ny ONG Lalana.
618 km ny fitambaran’ny lalana
Io RIF io atao hanangonan-kevitra ho fampandrosoana sy famolavolana tetibola ho an’ny fanamboaran-dalana kaominaly mirefy 618 km ny fitambarany any Anjozorobe. Samy manana ny drafitra teknika misy sary sy tomban’ny tetibola ho fanaovana izany lalana izany ny kaominina isanisany. Miainga amin’ireo drafitra sy tetibola ireo ny hitadiavana famatsiam-bola. Sivy ireo kaominina, tamin’ity taona ity, nahazo famatsiam-bola avy amin’ny faritra Analamanga, nanaovana Himo na asa tana-maro, ary fokontany maro nahazo fanohanana avy amin’ny zanaka am-pielezana.
Tokony hampiharina any ambanivohitra rehetra
Nofaritana ho laharam-pahamehana ny lalana manamora fitaterana any ambanivohitra, distrikan’Anjozorobe. Tokony hampiharina any ambanivohitra rehetra manerana ny Nosy io DFK io. Maro ny vokatra tsy tafavoaka, manjaka ny tsy fandriampahalemana, ankoatra ny lafiny sosialy tsy mivoatra, toy ny sekoly sy ny hopitaly, noho ny faharatsian-dalana.
Eo ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana fa tsy hita taratra izay tena fitsinjaram-pahefana izay. Takina amin’ny kaominina ambanivohitra ny hetra nefa ny mponina mahantra ; misy ny Tahiry ho an’ny fampandrosoana ifotony (FDL), saingy maivana loatra ny fanampiana tonga any ambanivohitra, raha misy.